Sawirro: Maxaa kajira in Itoobiya iyo Soomaaliya yeelanayaan hal baasaboor? – Warfaafiye:
Sawirro: Maxaa kajira in Itoobiya iyo Soomaaliya yeelanayaan hal baasaboor?
Ali Mohyadin Feb 12, 2018 2
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ujeedkan shirkan laga leeyahay uu yahay in Baasaboor mid ah loo sameeyo Soomaaliya iyo Itoobiya waana qorshe uu toban sano ka hor soo hindisay Males Zenawi R/wasaarihii hore ee Itoobiya. Jamaaludiin Mustafa oo ah Safiirka dowladda Itoobiya uqaabilsan Soomaaliya ayaa shirka daah furay wuxuuna sheegay in dowladaha ku bahoobay Urur goboleedka IGAD ay sameyn doonaan sharci usamaaxaya dadweynaha geeska Afrika in baasaboor la’aan ay isugu kala gooshaan.
Mas’uuliyiin ka socda dowladda Itoobiya oo huwan shaatiga Ururka IGAD ayaa dadaal ugu jira sidii ay wakiillada ‘Beesha Caalamka’ uga dhaadhicin lahaayeen in Soomaaliya iyo Itoobiya loo sameeyo hal baasaboor taas oo ka dhigan in madax banaanida dalka lagu wareejiyo Itoobiya arrintaas oo diblumaasiyiintu ku tilmaameen gumeysi dadban oo shacabka Soomaaliyeed lagelinayo. Dowladda Federaalka ayaa dhankeeda qirtay in shir ku saabsan socdaalka uu Ururka IGAD Uga furmay Xerada Xalane balse si kale ayay u dhigtay oo agaasimaha waaxda Socdaalka ayaa warbaahinta u sheegay in shirkaan uu daah fur u yahay qorshe lagu baadi goobayo sidii Baasboor mid ah loogu sameyn lahaa shucuubta wadamada Bariga Afrika.
Abdikarim says 3 months ago
Waxaa nasiibdaro wayn iyo wax laga argagaxo in caasimadii Somaaliya lagu qabto shir lagu falanqaynayo sidii shacabka Soomaaliyeed ee xorta ahaa loo hoos geynlahaa gumeysi. War aaway caqligii xalaasha ahaa,sow baasaboorku ka turjimi, maayo xornimada wadanka.
Subciyoow says 3 months ago
Walaalahaa hadey kula midoobaan ma dhib baa u arag huuno